Uhlamvu Lwemali Lweviki: Chiliz (CHZ) | Klever Ezezimali
I-Chiliz iyi-cryptocurrency esetshenziselwa kuphela ezemidlalo nokuzijabulisa yifemu yase-Malta yase-FinTech.
Yini i-Chiliz (CHZ)?
I-Chiliz iyi-cryptocurrency esetshenziselwa kuphela ezemidlalo nokuzijabulisa yifemu yase-Malta yase-FinTech. Isebenzisa i-Socios, inkundla yokuzijabulisa yezemidlalo esekwe ku-blockchain evumela abasebenzisi ukuthi babambe iqhaza ekubusweni kwemikhiqizo yabo yezemidlalo abayintandokazi. Amathokheni amaningi abalandeli be-Socios.com ayisibonelo salokho. Umlandeli owazizwela unikeza indlela yokuxhumana nabalandeli futhi uvule imithombo yemali engenayo yamakilabhu ezemidlalo nezinhlangano.
Ubuchwepheshe be-Chiliz buvumela izinhlangano zezemidlalo ukuthi zikhiphe inombolo elinganiselwe yamathokheni abalandeli ku-FTO yokuqala (umnikelo wethokheni yabalandeli). U-Chiliz udalula intengo yokuvula kanye nekhephu yemakethe ehlanjululwe ngokugcwele yamathokheni, futhi anikezwa ngokuthi ofike kuqala, isisekelo sokuhlinzekwa kuqala. Ithokheni yomdabu ye-CHZ isetshenziselwa ukuthenga amathokheni abalandeli futhi isetshenziswa njengohlobo lwemali yangaphakathi yesikhulumi. Ngezinkontileka ezihlakaniphile, abalandeli bangavota kunkundla ye-Socios besebenzisa amathokheni abo abalandeli. Amakilabhu anquma ukuthi abalandeli banethonya elingakanani. Lokhu kuhlanganisa yonke into kusukela ekwakhiweni kwejezi emisha kuya ekunqumeni imidlalo yamaqembu emidlalweni yemibukiso.
Abasunguli beChiliz: Bangobani?
Umphathi wayo wamanje, u-Alexandre Dreyfus, wasungula uChiliz ngo-2001. U-Dreyfus usesungule futhi wakhulisa izinkampani ezisekelwe kuwebhu iminyaka engaphezu kwengu-20. Ngaphambi kokusungula u-Chiliz, udale i-Webcity, inkomba yokuhamba esebenzisanayo, i-Winamax, ne-Chilipoker, womabili amaphrojekthi we-poker aku-inthanethi. Njengengxenye ye-Fan Tokens, umgomo wakhe “ukusebenza kanzima kunangaphambili emsebenzini wethu wokusungula ngokugcwele ama-Fan Tokens njengethuluzi lokugcina lokubandakanya abalandeli futhi njengomkhiqizi omusha onamandla wemali engenayo embonini yezemidlalo.” Amakilabhu amaningi, okuhlanganisa namancane, abhalisele amathokheni abalandeli ngenxa yalokhu kwanda okunolaka.
Chiliz: Yini Eyenza Ihluke?
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-Chiliz, yonke inhlangano yezemidlalo inokunikezwa okulinganiselwe kwamathokheni abalandeli anikezwa ku-FTO yokuqala (umnikelo wethokheni yabalandeli). U-Chiliz udalula ngaphambili inani lentengo yokuvula kanye nemali yemakethe ehlanjululwe ngokuphelele yalawa mathokheni, ewanikeza ngokuthi ofike kuqala, isisekelo sokuqala. Njengemali yangaphakathi yesikhulumi, ithokheni yendabuko ye-CHZ isetshenziselwa ukuthenga amathokheni abalandeli. Besebenzisa izinkontileka ezihlakaniphile, abalandeli bangakwazi ukuvota endaweni ye-Socios ngamathokheni abo abalandeli. Amakilabhu anquma ukuthi abalandeli banethonya elingakanani. Izinhlobonhlobo zezinqumo ziyenziwa, kusukela ekukhetheni imiklamo emisha yejezi kuya ekunqumeni ukufana kwamaqembu emidlalweni yombukiso.
Ngo-Chiliz, abalandeli bezemidlalo abamaphakathi bangabamba iqhaza ngokuqondile ekuthathweni kwezinqumo kwamakilabhu nezinhlangano. Nge-Chiliz Blockchain Campus, incubator ye-cryptocurrency ephethwe ngasese esheshisa ukutholwa kwe-blockchain kulo lonke elase-Asia naseYurophu njengesibonelo esisodwa, inkampani ngokuqhubekayo idala izindlela ezintsha zokuthi abalandeli bazibandakanye. Ekupheleni kuka-2021, inkampani ilindele ukuthi ibe namaqembu angama-80-100 njengengxenye yenethiwekhi yayo, okuseyi-10% kuphela yamandla ayo.
Izinhlamvu zemali zikaChiliz (CHZ) ezijikelezayo: Zingaki?
Kusukela ngo-Okthoba 2018, inani eliphelele le-CHZ laliyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-8.8, lasatshalaliswa kubanikeli bangaphambi kwesikhathi ngaphandle kokuthengiswa komphakathi okungaphezu kwalokho okwatholakala ngokuhwebelana.
Nakuba i-CHZ yethulwa njengethokheni ye-ERC-20, kamuva yaklanywa ukuthi ihambisane ne-BEP-2, isebenzisa indima ka-Binance Launchpool ekukhululeni amathokheni abalandeli njengengxenye yobambiswano lwamasu. I-CHZ iyatholakala futhi ku-Tron blockchain njengethokheni ye-TRC-20.
Ivikeleke Kanjani Inethiwekhi YakwaChiliz?
I-CHZ ingatholakala kuma-blockchains amaningana, okuhlanganisa i-Ethereum, i-Binance Smart Chain, ne-Tron. Abalandeli bavota kuphela kumapholi acwaningwe esidlangalaleni ngendlela yawo yokulawula izixuku ehambisana ne-Socios sidechain. Ngenxa yomshini wayo wokulawula izixuku, abalandeli basendaweni evikelekile futhi amathokheni abo enziwe ku-Socios sidechain. I-sidechain isebenzisa ukuvumelana kobufakazi begunya. Iningi lobufakazi begunya lisetshenziswa izinhlangano ezizimele ezinama-blockchain avaliwe futhi abasebenzisi kuphela ngaphakathi kwe-ecosystem yabo. Le nqubo yokuvumelana ihlukaniswe kancane kunezinye izindlela, kodwa iyakala kakhulu futhi ivikelekile, okuyenza ibe yinketho efanelekile ye-sidechain. Ithokheni ye-CHZ yacwaningwa yi-Certik.
Ungathenga kuphi uChiliz (CHZ)?
Lokho kusobala, Klever Wallet futhi uhwebe Klever Exchange.
Isilinganiselwa: 1 Amavoti: 1